တရုတ်ဒုစရိုက်ကွန်ရက်များ ကရင် ပြည်နယ်တွင် ကာစီနိုမြို့သစ် ၃ ခု တည် ထောင်နေပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နှောင့်နှေးနိုင်ဟု USIP က သတိပေး - ရန်ကုန်ခေတ်သစ် မီဒီယာ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၄ ခုမှ ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံ
ရခိုင်လူမျိုးချင်း AA က ALP အဖွဲ့ဝင်ကိုဖမ်းဆီးမှု လုံးဝမဖြစ်သင့်ဟုဆို
မြေသိမ်းခံကရင်နီတောင်သူ ၂၁ဦးကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှု နည်းပါး၍တပ်မတော် က ပြင်ဆင်ချက်တက်မှု ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်က ပယ်ချ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသား ဦးအောင်ပြည့်စုံ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ပါဝင်သော A & M Mahar ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ အကျိုး စီးပွားပဋိပက္ခရှိနိုင်ဟု ဝေဖန်ခံရ
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် နိုင်ငံရေး ပါတီ ၃၄ ခုမှ ခေါင်းဆောင်များ ၂ နာရီကျော်ကြာ တွေ့ဆုံမှု အသေးစိတ်များ
၂၁ ပင်လုံညီလာခံ AA ကို မဖိတ်ကြား ၍ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့များ မတက်ရောက်တော့
Home China Watch
China Watch Local News Peace political news
တရုတ်ဒုစရိုက်ကွန်ရက်များ ကရင် ပြည်နယ်တွင် ကာစီနိုမြို့သစ် ၃ ခု တည် ထောင်နေပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နှောင့်နှေးနိုင်ဟု USIP က သတိပေး
July 30, 2020 36
တရုတ်ဒုစရိုက်ကွန်ရက်များ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ကာစီနိုမြို့သစ် ၃ ခု တည် ထောင်နေပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နှောင့်နှေးနိုင်ဟု USIP က သတိပေး
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၃၀
တရုတ်ဒုစရိုက်ခေါင်းဆောင်များ၊ ဒုစရိုက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကွန်ရက်များက ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့နယ်ရှိ ရွှေကုက္ကိုလ် လောင်းကစားကာစီနိုမြို့သစ် စီမံကိန်း အပါအဝင် ကာစီနိုမြို့သစ် စီမံကိန်း ၃ ခုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေပြီး ယင်းသို့ ပါဝင်ပတ်သက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို နှောင့်နှေး လျော့ပါးစေလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း USIP (United States Institute of Peace ) က အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် သတိပေးလိုက်သည်။
ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်သော အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် နိုင်ငံတကာခြေဆန့်နေသည့် ရှုပ်ထွေးလှသော ဒုစရိုက်အဖွဲ့အစည်းများသည် ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံတွင် ၎င်းတို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော တရားမဝင် လောင်းကစားလုပ်ငန်းများ နှိမ်နင်းခံရပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံကရင်ပြည်နယ်တွင် ကာစီနို လောင်းကစားမြို့သစ် စီမံကိန်း ၃ ခု တည်ဆောက် ပြောင်းရွှေ့လာကြောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ဒေသခံ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပူး ပေါင်း၍ မြေရယူပြီး အမြတ်ပြန်လည် ပေးအပ်ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ကာစီနိုင် လောင်းကစားလိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းမရှိဘဲ လောင်း ကစား လုပ်ငန်းများသည် တရားမဝင် အဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် မြန်မာဗဟိုအစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူရန် လျစ်လျူရှုခဲ့ပြီး ကိုဗစ်ကာလတွင် လောင်းကစားမြို့သစ်များကို လျှင်မြန်စွာ တည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း၊ အခြားနိုင်ငံသား ခံယူထားသော တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် တရုတ်ဥပဒေအရ အရေးယူခံရမှုများမှ ရှောင်ကွင်း၍ အဆိုပါ လောင်းကစား မြို့သစ်စီမံကိန်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကြေညာဆောင်ရွက်လာနေကြောင်း၊ ယင်းစီမံကိန်းကို တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမစီမံကိန်း အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလာရန် တရုတ်အစိုးရလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၊ အဆိုပါ ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သော လောင်းကစားမြို့သစ်စီမံကိန်း မျာ းသည် မြန်မာ့နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို နှောင့်နှေးစေပြီး နေပြည်တော်က စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ တရားမဝင် လောင်းကစားလုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပြည်တွင်းစစ်ပဋိပက္ခများအပေါ် ဆိုးကျိုးများ သက်ရောက် မည်ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာက သတိပေးထားသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် အခြားသော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများမှ တရုတ်ဒုစရိုက်ကွန်ရက်သည် ၎င်းတို့၏ တရားမဝင် လောင်းကစားလုပ်ငန်းများ နှိမ်နင်းခံရပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကရင်ပြည်နယ်တွင် ကာစီနိုမြို့တော်များ တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းလာကြောင်း၊ ယင်းတို့အထဲမှ တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတစ်ဦးသည် နိုင်ငံတကာဒုစရိုက်ကွန်ရက်များနှင့် ပတ်သက်သော ဒုစရိုက် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မကာအိုတွင် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ လူသတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှု အပါအဝင် ရာဇဝတ်မှုများနှင့် ထောင်ဒဏ် ၁၃ နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ကြောင်း၊ သူကျူးလွန်သော ဒုစရိုက်မှုများသည် မကာအိုတွင် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များက ကျူးလွန်ခဲ့သော လူသတ်မှုများ၊ မြို့တော်ရဲချုပ်ကို သတ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
သူနှင့်အပေါင်းအပါများသည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ လက်နက်တင်ပို့ ရောင်းဝယ်မှု ၊ တရားမဝင်လုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးခြင်း နောက်ကြောင်းများရှိနေပြီး လက်ရှိတွင်လည်း ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေး စနစ်အကောင်အထည်ဖော်နေပြီး ယင်းဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကို ကာစီနိုတွင် အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ကရင်ပြည်နယ်တွင် မြို့ကြီး ၃ မြို့ တည်ဆောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းမြို့ကြီးများတွင် ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးဖြင့်လည်ပတ်သော အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ၊ ကာစီနို၊ စက်မှုဇုန်၊ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်များ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် အဆင့်မြင့်အိမ်ရာများကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ကာစီနိုတချို့မှာလည်း တရုတ်ဝန်ထမ်းထောင်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
မြေယာနှင့်ပြည်တွင်းအထောက်အပံ့ရယူရန် တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် BGF ခေါ် ကရင် နယ်ခြားစောင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆက်ဆံလျက်ရှိပြီး အဆိုပါ ဆက်ဆံမှုသည် တရုတ်ဥပဒေစိုးမိုးရေး အဖွဲ့အစည်းများက နှိပ်ကွပ်သုတ်သင်လိုက်သော တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅ ဘီလီယံ တန်ကြေးရှိ အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှု များအတွက် နေရာပေးရန်ဖြစ်လာကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖိတ်ခေါ်နေချိန်ဖြစ်ရာ တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် မြန်မာဘက်သို့ ခြေဦးလှည့်လာကြောင်း တစ်ချိန်တည်းမှာပင် တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် မြန်မာနှင့် တရုတ်ဘက်မှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှု ရရှိရန် ၎င်းတို့ ဆောင်ရွက်နေမှုများသည် တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေး စင်္ကြန်နှင့် ပိုးလမ်းမအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပြောဆို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
ဒုစရိုက်မှုခင်း မှတ်တမ်းများရှိသော တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ စီမံကိန်းများတွင် တရုတ်အစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီများ ပါဝင်ရန် ဆွဲဆောင်လျက်ရှိပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း တရုတ်သံရုံး၊ တရုတ်အစိုးရလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်လည်း ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေကြောင်း၊ ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်က ဘေဂျင်းအစိုးရ၏ အသိအမှတ်ပြုမှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ဘေဂျင်အစိုးရက ကရင်စီမံကိန်းများသည် ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမ စီမံကိန်း၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကာ မြို့သစ်များနှင့် စက်မှုဇုန်များသည် တရုတ်အစိုးရ၏ ထောက်ခံမှု ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘေဂျင်းအစိုးရက အဆိုပါ စီမံကိန်းများသည် တရုတ်၏ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ စီမံကိန်းနှင့် မဆက်စပ်ကြောင်း မကြေညာသမျှ ကာလပတ်လုံး ယင်းစီမံကိန်းများ အဆိုပါနည်းလမ်းများအတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများနှင့် ရပ်ဝန်းနှင့်ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစစ် ပဋိပက္ခကို ပိုမိုဆိုးဝါးနေပြီး ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ဖြစ်ပေါ် ရေး တွန်းအားပေး ကူညီနေသော အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအတွက် သက်ရောက်မှုများရှိလာမည်ဖြစ်သည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် ဖော်ဆောင်မည့် မြို့သစ် ၃ ခုသည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် တရားမဝင် လောင်းစားမှု၊ ဒုစရိုက်မှု၊ ဒုစရိုက်သမားများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော တရုတ်စီးပွားရေး ကွန်ရက်က ထောက်ပံ့ထားခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ မြို့သစ်များတွင် အလုပ်အကိုင် ရရှိရေး ကြော်ငြာ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ ကြော်ငြာများကို တရုတ် Website bcquan.com တွင် တွေ့ရှိနိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါ စီးပွားရေးကွန်ရက်၏ အဓိက ပစ်မှတ်သည် တရုတ်ပြည်ဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်တွင် အွန်လိုင်း လောင်းစကားမှုသည် တရားမဝင်ဖြစ်ကာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့များက နှိမ်နင်းမှုများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ တရုတ်ဥပဒေများမှ လွတ်ကင်းရန်အတွက် ၎င်းတို့သည် ယင်းလောင်းကစားများကို လုပ်ကိုင်ရာတွင် အခြားနိုင်ငံသားခံယူခြင်း၊ မကာအို၊ ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ်နှင့် အခြားနိုင်ငံများမှ တရုတ်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ကြကြောင်း သိရှိရသည်။
USIP ၏ အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်ခေတ်သစ်အနေဖြင့် ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့တွင် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသော ရွှေကုက္ကိုလ်အိမ်ရာစီမံကိန်းသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂ ဒသမ ၅ သန်း တန်ကြေးရှိပြီး မြေဧက ၆၂ ဧက ပေါ်တွင် နှစ်ပေါင်း ၃၀ လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားကာ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံမှ လုပ်ငန်းရှင် ၄ ဦး အစုရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဗရက်ဆင်းက ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ ကျင်းပသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က Myanmar Yatia International Holding Group Co., Ltd. ကို ရွှေကုက္ကိုလ်အိမ်ရာစီမံကိန်း လုပ်ကိုင်ရန် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ခွင့်ပြုချက်အမှတ် ၀၉၉/ ၂၀၁၈ ဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အစုရှယ်ယာများအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဦးစောမင်းမင်းဦးက ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှ Mr.Tang Kriang Kaiက ၆၇ ဒသမ ၈၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံမှ Mr. Lim Jun Jieက ၈ ဒသမ ၀၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် Mr. Chow Tiam Yu က ၄ ဒသမ ၀၄ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးထည့်ဝင်ထားကြောင်း၊ ကုမ္ပဏီရဲ့ မတည်ငွေရင်းပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂ ဒသမ ၅ သန်းဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသက်တမ်းကာလက နှစ်ပေါင်း ၃၀ ဖြစ်ကြောင်း၊ မတည်ငွေရင်း ထည့်ဝင်ထားမှုက ကျပ် ၃၅၉၇ သန်း၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ ဒသမ ၀၈ သန်းထည့်ဝင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊မြေဧက ၆၂ အနက်မှ မြေဧက ၂၅ ကျော်ပေါ်တွင် အိမ်ရာစီမံကိန်း တည်ဆောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
ဓာတ်ပုံ- ၁ – BGF ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီး စောချစ်သူသည် ရွှေကုက္ကိုလ်မြို့သစ် Yatai New City စီမံကိန်းတွင် အဓိက ဦးဆောင်ပါဝင်နေသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံ- ၂- ရွှေကုက္ကိုလ်မြို့သစ်။
Photo by Nyein Su Wai Kyaw Soe/ USIP
ချစ်သုဝေနှင့် ဖခင်ကို တရားစွဲရန် ကြိုးပမ်းမှု သြဂုတ် ၅ ရက်နေ့ ရုံးချိန်းပေး
ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများ အမြန်ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ဟု ဒုဝန်ကြီးပြောဆို(ရုပ်/သံ)
ရွေးကောက်ပွဲ နီးကပ်လာချိန် အောင်လံတွင် လူငယ်တစ်ဦး အသတ်ခံရမှုကို အကြောင်းပြု၍ ဘာသာရေး ပြဿနာပုံစံဖန်တီးနိုင်သဖြင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန် တိုက်တွန်း
By Khit Thit News Agency June 25, 2020
ရိုက်တာသတင်းထောက် ၂ ဦး ထောင်ချမှုသည် ကြိုတင်ကြံစည်မှုဖြစ်၍ ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်က Own Motion ဖြင့် ပြန်ခေါ်စစ်ရန်တိုက်တွန်း
By Khit Thit News Agency December 2, 2018
“တပ်မတော်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစိုးရကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စက မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုလို့ ယူဆတယ်”
By Khit Thit News Agency December 16, 2018
ကော့မှူး၊ စမ်းချောင်းနှင့် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းတွင် H1N1 ဝက်တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် ၃ ဦးသေဆုံးသွား၊ လက်ရှိ သံသယဖြင့် စောင့်ကြည့်နေရသည့် လူနာများ ရှိနေ
A(H1N1) ရာသီပေါ်တုတ်ကွေး ရောဂါပိုးနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်၊ သွေးလွန်တုတ်ကွေးရောဂါကရန်ကုန်တွင် ပိုမို ကြောက်ရကြောင်း ပြောကြား
All News Health Local News
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဝူဟန်ကော်ရိုနာ အဆုတ်ရောင်ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးသံသယလူနာတစ်ဦး ရောက်ရှိဟု သတင်းထွက်ပေါ်လာ
Health Local News political news
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မိတ္တီလာနှင့် မူဆယ်မြို့များတွင် ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် သံသယ လူနာများ တွေ့ရှိထား
3. Why Advertise on Khit Thit Media ?
5. Our Team
6. Terms & Conditions
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုးကို ငဖြီးကြီးလို့ စမ်းချောင်းအမတ်က အမည်တပ်၊ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်မသိရင် မလုပ်နဲ့လို့ဆို
ကညနက ဖောက်စွပ်ဆိုပြီးကားတွေ သိမ်းနေတဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ
ရန်ကုန် အလုံမြို့နယ် ဗဟိုလမ်း ဗဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံရှေ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ခြံအမှတ် ၅၁ ခ တွင် မျက်နှာဖုံးစွပ် လူအုပ်စုဖြင့် အနုကြမ်းဝင်စီး၊ ဓားစာခံတစ်ဦးခေါ်ဆောင်သွား၊ တရားခံ ၂ ဦး ဖမ်းမိထား
©2018. Yangon Khit Thit Media